२३ पुस, झापा । झापास्थित दमक नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालसहितका जनप्रतिनिधिहरुले आफनो पारिश्रमिक तथा प्राप्त सेवा सुविधा बापतको रकमबाट वडाका एक विपन्न परिवारलाई पक्की घर बनाइदिएका छन् ।
पाँचथर पुख्र्यौली घर भएका लामिछानेको परिवार करिब ४० वर्षदेखि दमकमा बसोबास गर्दै आएको हो । वृद्धाका पति भीमनारायण स–साना छोराछोरी काखमा हुँदै बितेका थिए। तीन छोरामध्ये जेठो छोरा अघनबहादुर लामो समयदेखि रोजगारीका लागि भारततिर घर छोडेर हिँडे। बुबाको निधनपछि दुःखमा परेको परिवारको भविष्यका लागि भनेर भारततिर पसेका उनी अहिलेसम्म घर फर्किएका छैनन् । “मर्यो, बाँच्यो, कहाँ, छ, छैन अहिलेसम्म खोजखबर आएको छैन । देख्ने सुन्नेहरु पनि कोही छैनन्”, विलौना गर्दै वृद्धा धनमायाले भनिन् ।
गण्डकी प्रदेशः पछिल्लो २४ घण्टामा १२३ संक्रमित थपिए
भूमिहीन सुकुम्वासी संगठनद्वारा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, कारोवार रकम बढ्यो
झाँक्रीलाई रिहाइ नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने युवा संघको चेतावनी !
प्रदेश २ मा भोलि सार्वजनिक बिदा
कोरोनाले घट्यो सिकार : एक झारल र एक नाउर मारिने
शुक्रबार ह्वात्तै घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौंमा १६९२ सहित उपत्यकामा थपिए १९३५ जना कोरोना संक्रमित
वल्डलिंक कम्युनिकेशन्स ‘खुकुरी नेपाल सुपर लिग २०२१’ को प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडियो